Fanairana – Ritra ny tahiry fanampiana ny osa ara-pivelomana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fanairana – Ritra ny tahiry fanampiana ny osa ara-pivelomana
Nanao antso avo tamin’ ny fitondram-panjakana, ny fianakaviam-be iraisam- pirenena, ny mpamatsy vola mahazatra, ry zareo mpandrindra ny Vovonan’ ny fiarahamonim-pirenena miahy ny ankizy na ny Pfsce.
« Telo taona taorian’ ny krizy,dia efa ho ritra tanteraka ny tahiry fanam- piana ireo fianakaviana malia ara-pivelomana. Tsy manam- bola hihetsehana hamonjena azy ireo intsony ireo fikambanana sy Ong mpiahy azy ireo », hoy Noromanana Lalaharivony. Nisy ny nampiato ny fandraisany anjara. Nisy kosa no nanova ny sehatra vatsiany vola. « Raha tahiny jerem-potsiny izany dia toy ny manosika ireo olona ireo hilentika any anaty hantsan’ny fahantrana. Tokony hisy fanampiana vonjy taitra hatao », hoy ihany izy.
Krizy, Mpanoratra Rijakely, 20.07.2012, 09:08	FIARAHAMONINA